inqubo yokufakelwa kokushisa ukushisa nge-high heater frequency
Ikhaya / Izicelo / Ukushisa Ukushisa / Induction Ukushisa Ukubekwa uphawu
Ukwehlisa Ukushisa Ukushisa
Isigaba: Ukushisa Ukushisa Tags: ukufudumeza uphawu, ukushisa imvamisa ephezulu, imvamisa ephezulu yokubeka uphawu, ukukhipha ukushisa ukufaka uphawu, lokungenisa lokushisa lokushisa, inqubo yokungena uphawu, ukubopha ukushisa lokungeniswa
Induction Heating Sealing With High Frequency Induction Ukushisa Izinsiza
Ukushisa ukushisa inikeza indlela enhle yokugcizelela izembozo ze-aluminium emigodini yemikhiqizo yokudla. I Induction Ukushisa Ukushiswa indlela yokupakisha iqinisekisa ukuvikelwa okunamandla, ukuphepha, ukuhlanzeka nokulondolozwa komkhiqizo. Ukushisa ukushisa kwefilimu ye-aluminium kwandisa izinga lokushisa komkhiqizo wokugcizelela osebenza eceleni koqweqwe oxhumana naye. Lokhu kushisa kuhlanganiswe nengcindezi esetshenziselwa ikhava ye-0.5 ku-1.5. Le nqubo isetshenziselwa zonke izinhlobo zezinhlaka kanye nezinsiza ezihlukahlukene, kubandakanya: ingilazi, amakhadibhodi, nama-plastiki (PE, PP, PVC ...).
Kuzo zonke izimo akukho ukuxhumana phakathi kwe-inductor nesembozo. Ngaphezu kwalokhu kunenzuzo, kunezizathu eziningana zokuthi kungani le ndlela entsha isetshenziswa ngokuphindaphindiwe:
■ Ukushisa kukhiqizwa esikhwameni ngokwalo
eduze ukusondeza phezulu ngangokunokwenzeka. I
inqubo yenziwe lula futhi izinkinga
ehambisana nokushisa komphikisi
Uhlobo lwezintambo zokumboza lugwetshwa.
■ Indlela yokushisa yokushisa yokufakelwa ingasetshenziselwa isiyingi, i-oval,
square, emaceleni noma ezinye izimo
■ I-generator yemvamisa ephakathi yenziwa
usebenzisa izingxenye zombuso oqinile futhi akanawo
izingxenye okufanele zigqoke ngesikhathi senqubo yokuvalwa kokushisa.
Sinikeza izinhlobo eziningana Ukwehlisa Ukushisa Ukushisa izinhlelo:
■ Ukukhipha ukushisa okukodwa kwesinyathelo esisodwa.
■ Ukushisa ukushisa okuqhubekayo ngaphambi kokufaka isikhala.
■ Ukushisa okufakelwayo okuyi-Static ngaphambi kokufaka isikhala.
induction ukushisa steel plate